China Milk Pot Cast Iron Enamel Casserole Non-Stick Frying Pan Baby Frying Pan Baby Sakafo Sakafo Famonoana Hot Milk Noodle Pot Fanamboarana sy Factory | SANXIA
Milk Pot Cast Iron Enamel Casserole Non-Stick Frying Pan Baby Frying Pan Baby Sakafo Famonoana Hot Milk Noodle Pot
Famaritana:80180 * 125mm
lanja:2.47kg eo ho eo
loko:Fotsy, mavokely, cyan, mainty, loko isan-karazany hisafidianana
Ny loko vaovao sy kanto dia manampy toerana tsara tarehy ao an-dakozia. Ny vilanin-dronono enamel dia toa tsara tarehy, mba hahafahanao mankafy ny fahafinaretana mahandro mahandro, nefa koa ny loko ankafizin'ilay zaza, azonao atao ny manokatra ny fahazotoan-komana mora foana.
Vita amin'ny vy vy sy verinia izy io. Salama izy io ary tsy misy firakotra simika. Afanaina tsara izy io. Malefaka ny rindrin'ny enamel. Ny fandrahoan-tsakafo dia tsy mora ny mifikitra amin'ny vilany.
Ny fonosana vy dia mitana andraikitra famehezana, manakana ny hafanana feno ao anaty vilany, izay mahatonga ny sakafo hahandro haingana kokoa. Na dia maty aza ny afo dia afaka mitazona lava ny hafanana ary manafana lava ny sakafon-jaza.
Ny fanambanin'ny vilany dia matevina hamorona rafitra misy rindrina matevina sy rindrina manify, mba hitovy kokoa ny fanamainana ny vatan'ny vilany, ho malama sy malefaka kokoa ny sakafo fandrahoan-tsakafo, ho haingana kokoa ny fitarihana hafanana, ary ny azo tehirizina ny sakafo ara-tsakafo.
Ny atiny sy ivelan'ny vilany dia vita amin'ny vera vita amin'ny enamel avo lenta, izay mety kokoa amin'ny fandrahoana sakafo. Ohatra, mahazaka asidra-base, malama, tsy mora raikitra, tsy mora mifikitra menaka, ary mora sasana amin'ny tanana. Izy io dia mety amin'ny karazana fahandro rehetra (tsy misy lafaoro lafaoro) .Raha ampiasaina any an-trano dia mety kokoa amin'ny afo mandrehitra sy madinidinika ary mangotraka, miaraka amina fanafanana sy hafanana maharitra.
Afaka mamaritra loko, karazana loko vaovao isan-karazany hisafidiananao, avelao hanakaiky ny fon'ny mpampiasa ny loko tsara tarehy, hitondra fahafinaretana mahandro ho azy ireo kokoa, hitondra sakafo mahafa-po kokoa. Ireo vokatra dia hojerena tsara ary hosedraina alohan'ny handaozana ny orinasa mba hahazoana antoka ny fisehoana tonga lafatra sy ny fanandramana mahafeno fepetra. Ny fanamarinana kalitao dia hamela anao hahazo antoka.
Teo aloha: Enamel tsy misy kalitao avo lenta vy fanendasana vilany steak
Manaraka: Ny fanendasana vy fanendasana vy miaraka amina tapa-kazo tokana dia tsy mora raikitra raha tsy misy sarona
Siny Enamel tsara tarehy
Atsofohy vy Casserole Enamel Coating
Mora diovina ny vilany enamel
Vy vy nopetahany enamel
Vilany vita amin'ny ronono
Fantsom-boasary tsy vita amin'ny hazo kesika
Ambongadiny Enamel Pot
Enamel vilany sy siny
Enamel Square Grill vilany
Vy vy nandrora
Bakeware amin'ny vy vita amin'ny vy
Napetraka vy napetraka vy
Vilany enamel marobe
Vy vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Vilany enamel mamonjy rano
Manaova vilany enamel manohitra
Enamel vilany lasopy ao an-trano 24cm non stick en ...
Cast Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet, namel Skillet, xtreme Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast,